London Trip to Attend One Young World Summit (Preparation) | The World of Pinkgold
ဒီလိုနဲ့ ရက်တွေသာ ကြာလာတယ် စပွန်စာလည်း မရခဲ့သလို One Young World အဖွဲ့ကလည်း စပွန်စာမရလို့ မတက်နိုင်ရင်လည်း စိတ်မညစ်ကြဖို့နဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဒီပွဲကြီးကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြောင်း စာတွေပို့လာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ မဲ့လို့ပေါ့လေ။ မြန်မာပြည်က အရွေးခံရတဲ့ အခြား delegate တွေလည်း စပွန်စာ မရကြပါဘူး။ တစ်ကယ်ဆို မြန်မာပြည်က စုစုပေါင်း ငါးယောက် အရွေးခံထားရတာပါ။ Summit တက်ရဖို့တော့ ဝေးပါပြီဆိုပြီး အချင်းချင်းတောင် ပြောနေကြသေးတာ။
ဒီလိုနဲ့ ဇန်န၀ါရီလ (၈) ရက်နေ့မှာ ကျွန်မဆီကို One Young World က အီးမေလ်းလာပါတယ်။ American Express ကနေ ကျွန်မကို သူတို့ရဲ့ Official Sponsored Delegate အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တယ်တဲ့။ သူတို့နဲ့ အင်တာဗျုးတွေ ဘာညာတွေ လုပ်ရမယ်တဲ့။ ကျွန်မမှာ ပျော်လိုက်တာ။ တစ်ညလုံးအိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ လန်ဒန်သွားရမယ့် အရေးကိုလည်း စိတ်ကူးတွေ ယဉ်လို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ passport အမြန်လုပ်ရပါတယ်။ Visa လျှောက်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်ရတော့တာပေါ့။ ဟိုဘက်ကလည်း Invitation Letter တွေ ပို့ပေးပါတယ်။ Air Ticket လည်း ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်မမှာတော့ Passport လည်း မရသေး.. ဗီဇာလည်း မလျှောက်ရသေးဘူးလေ။ ဒါနဲ့ ဇန်န၀ါရီလကုန် ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်းလောက်မှာ Passport ရပြီး ချက်ချင်းပဲ ဗီဇာတွေ ဘာတွေလျှောက်ရတာပေါ့။ ကျွန်မကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဗီဇာပေးလိုက်ပါတယ်။ Counsellor နဲ့တောင် မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီအတိုင်း ကျလာတာပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ Passport စာအုပ်မှာ ပထမဆုံး ဗီဇာက UK Visa ဖြစ်နေတာကို ၀မ်းသာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။
တစ်ဘက်ကလည်း ကျွန်မ Summit မှာ သူများတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အင်တာနက်ကနေရော ၊ ဆရာတွေနဲ့ရော တိုင်ပင်ပြီး အချက်အလက်တွေ စုပါတယ်။ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် မကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်မပို့ပေးတဲ့ Link တွေဆီကနေတစ်ဆင့် ကျွန်မအတွက် Download တွေ လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဘက်ကလည်း ကျွန်မရဲ့ မိဘ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မကို စိတ်ပူကြပါသေးတယ်။ ဒီ Summit က ဘာလား ညာလား.. ကျွန်မမြန်မာပြည်ပြန်လာရင် အန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်လားပေါ့လေ။ Press တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့လည်း ကျွန်မကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း ဒါဟာ ဗဟုသုတ သွားယူတာဖြစ်ကြောင်း ဘာမှမထိခိုက်နိုင်ကြောင်း အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပြီး Press တွေကိုတော့ ရှောင်ပါ့မယ်လို့ မိဘတွေကို ကတိပေးရပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ခရီးသွားရမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့က တစ်ဖြည်းဖြည်းနီးလာပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာလည်း One Young World Group, Forum အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ တစ်ခြားနိုင်ငံက လာမယ့်သူတွေနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေလုပ်၊ အချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြ၊ အကြိုဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ကြနဲ့ အတော်လေးပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ စင်ပေါ်ကနေ စကားပြောရမယ့် သူတွေထဲမှာ ကျွန်မ အရွေးမခံရပါဘူး။ အို လူ ၁၅၀၀ ထဲက ခြောက်ယောက်ထဲမှာ ပါဖို့ဆိုတာကတော့ ခက်ခဲပါတယ်လေလို့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ဖြေပြီး ဒီအတိုင်း Informal Discussion လေးလုပ်ဖို့တော့ စဉ်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ ခရီးမသွားခင်မှာ ကျွန်မပြင်ဆင်ရတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ပထမဦးဆုံး သွားရမယ့် နိုင်ငံခြားခရီးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားရသလို စိတ်လည်း ပူမိပါသေးတယ်။ အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ခွန်အားလည်း ဖြစ်ရပါတယ်။ ထောင့်စုံ နေရာစုံကနေ ကူညီပေးကြတဲ့ သူတွေကြောင့်လည်း တက်ကြွမှု ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်မ ခရီးသွားဖို့ Baggage ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ငှားပေးပါတယ်။ အနွေးထည်ထူထူတစ်ချို့ကိုလည်း ရုံးက အယ်ဒီတာ မမတစ်ယောက်က ငှားပေးပါတယ်။ အင်္ဂလန်ရောက်ရင် ဖုန်းပြောနိုင်ဖို့ Handset လည်း လက်ဆောင်ရပါတယ်။ တစ်ခြားကိစ္စတွေကိုလည်း အကူအညီတွေပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကျွန်မ အင်္ဂလန်မရောက်ခင်ကတည်းက ဒီခရီးအတွက် ပြင်ဆင်ရတာဟာ ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲရှင်။
kozeyar on February 22, 2010 at 7:46 am said:
မိုက်တယ် … ထပ်တူထပ်မျှ ဂုဏ်ယူပါတယ် … တကယ်ပါ။
နောက် ပို့စ်တွေကို မျှော်နေမယ်
ခွန်မြလှိုင် on February 22, 2010 at 9:41 am said:
အမလေး ဖတ်ရတာနဲ့တင် မောလုိုက်တာ… အဲလိုပါပဲ မြန်မာပြည်က အထွက်ရ သိပ်ခက်တဲ့ နိုင်င်ံထဲမှာပါတယ် ထင်တယ်.. အမတုန်းကလဲ ခြေကိုတိုလို့…. ပတ်စ်ပို့ရဖို့ကို မနည်းမနော လုပ်လိုက်ရတယ်
Rosalie on February 22, 2010 at 11:47 am said:
တခါတလေကျရင် ဒါဟာတကယ်အဖြစ်အပျက်ပါလား လို့တောင်ထင်မိတယ် အဲဒီလိုအချိန်ကျရင်ပေါ့ ….. ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂူဏ်ယူမိပါတယ်…
Zaw Lynn Dwe on February 22, 2010 at 12:08 pm said:
အေးအေးဆေးဆေးရေးပါ။ မြန်မာပြည်လေဆိပ်အထွက် ကတည်းက စင်္ကာပူတဆင့် ပြီးမှ ဟီးသရိုး ဖြည်းဖြည်းသာရေးညီမလေး။ လန်ဒန်အကြောင်းက ဖြည်းဖြည်းပေါ့။ ခေတ်မီတိုးတက်တာတွေက သိပြီးသားတွေဖြစ်နေကြပေမယ့် နေရာတိုင်း၊ အဖြစ်အပျက်တိုင်းကို ကိုယ့်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ ယှဉ်ပြီးရေးပြပါလား။ အသက်အရွယ်တူတွေစုမိတဲ့ အချိန်တွေမှာ တို့ရွှေတွေနဲ့ သူတို့ ဘာကွာလဲ၊ အဲဒါတွေလည်း ရေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စောင့်ဖတ်မယ်နော်။ တစ်ပုဒ်ပြီးတိုင်း FB မှာတင်ပါ။ လာဖတ်မယ်။
TGRmg on February 22, 2010 at 5:29 pm said:
talkative on February 22, 2010 at 8:59 pm said:
I’m not sure whether it’sagood thing to send more than 10 letters to the organizing committee to get funding…we have to be careful with that…we don’t want people from other countries look down on us, do we? we don’t want the world to think burmese are funding-hungry…..anyway, well-done!
ညီညီမြန်မာ on February 23, 2010 at 1:51 am said:
ဂုဏ်ယူပါတယ် သူငယ်ချင်း နောက်လည်းဒီထက်မက အောင်မြင်နိုင်ပါစေ
Kyaw Kyaw Htun on February 23, 2010 at 8:27 am said:
မထက် ဂုဏ်ယူပါတယ် .. မိုက်တယ်နော် .. အားကျတယ် . ..
cuttiepinkgold on February 23, 2010 at 12:28 pm said:
အဆုံးထိ ဆက်ရေးသွားမှာပါ.. ဖတ်ပေးကြတာ ကျေးဇူးပါ
Talkii on February 25, 2010 at 2:49 am said:
@talkative, you are right. It’s not good to request like that. But we need to understand how we gonna spend the money we get. It’s not like waiting for donor like some NGO do. To me, I believe other countries, especially OYW org may already understand about that kind of request.
Aye on March 2, 2010 at 3:38 am said:
julyDream on March 3, 2010 at 4:43 am said:
Cheer! U did it. =)